11 Feb 2019 . 1:01 PM
အင်္ဂလိပ်တို့က ကိုလိုနီတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပင် မြန်မာနိုင်ငံကို သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် (Divide and Rule) နဲ့ အုပ်ချုပ်သည်။ နောက်ဆုံးမဖြစ်မနေ လွတ်လပ်ရေးပေးရမည့် အခြေအနေရောက်သည့်အချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံကို တောင်တန်း၊ ပြည်မခွဲခြားပြီး ပြည်မကိုသာလွတ်လပ်ရေးပေးချင်သည်။ ပင်လုံစာချုပ်သာ မရှိခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည် တောင်တန်းနှင့်ပြည်မဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းကွဲသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်မီက အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ပြည်မကို ၁၉၃၅-ခုနှစ် ဗမာနိုင်ငံအစိုးရအက်ဥပဒေအရ အုပ်ချုပ်ပြီး တောင်တန်းဒေသကိုတော့ ဘုရင်ခံကတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သည်။ စစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံ ဒေါ်မန်စမစ်၏ စက္ကူဖြူစာတမ်း (Burma Statement of Policy by H.M.G, 1945) အရ တောင်တန်းဒေသကို စစ်မဖြစ်မီကအတိုင်း ဘုရင်ခံ၏လက်အောက်ခံအဖြစ်ထားရှိကာ တောင်တန်းဒေသက ပြည်မနှင့်ပူးပေါင်းလိုသည်ဟု တောင်းဆိုသည့်အချိန်အထိ ဘုရင်ခံကသာအုပ်ချုပ်မည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအခါ ပြည်မနှင့်တောင်တန်းဒေသ တစ်ပြိုင်နက်လွတ်လပ်ရေးရယူဖို့အတွက် ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆို ရန် လိုအပ်လာပါသည်။
ပထမ ပင်လုံအစည်းအဝေး ပထမပင်လုံ အစည်းအဝေးကို ၁၉၄၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁ မှ ၁၂ အထိကျင်းပခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က ဗိုလ်ချုပ် ရခိုင်ဖက်တွင်အရေးကိစ္စရှိနေ၍ ဖဆပလ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သခင်နု၊ ဦးဘဂျမ်းနှင့်မန်းဘခိုင်တို့က တက်ရောက်သည်။သို့သော် ထိုညီလာခံတွင် မည်သည့်နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်မျှ မချနိုင်ခဲ့ဘဲ ဆွေးနွေးရုံ အမြင်ချင်းဖယ်လှယ်ရုံသာရှိခဲ့သည်။ ထိုပထမပင်လုံ အစည်းအဝေးသည် ဆွေးနွေးပွဲသက်သက်သာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် ဗြိတိသျှအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးပေးလျှင် ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင် တောင်တန်းဒေသတွေကိုပါ လွတ်လပ်ရေးပေးဖို့တောင်းဆိုသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရှမ်းစော်ဘွားများက မိုင်းရယ်တွင် စည်းဝေးပြီး အင်္ဂလိပ်အစိုးရထံ ကြေးနန်းပို့လိုက်သည်။ “အောင်ဆန်းဟာ ငါတို့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်။ ရှမ်းပြည်အတွက် ဘာမှပြောခွင့်မရှိ၊ ရှမ်းပြည်ကိစ္စဆွေးနွေးလိုလျှင် ငါတို့ကိုဖိတ်ပါ။” ဟူ၍ ကြေးနန်းပို့လိုက်သည်။သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်ကိုထောက်ခံသောလူငယ်ခေါင်းဆောင်များ တောင်ကြီးနှင့်တကွ နီးစပ်ရာလက်လှမ်းမီရာမြို့အချို့တွင် ဆန္ဒပြကြပြီး ထောက်ခံကြောင်းကြေးနန်းပြန့်ပို့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကို ထောက်ခံသူနှင့်ကန့်ကွက်သူဟူ၍ နှစ်မျိုးပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဗြိတိသျှနန်ရင်းဝန် အက်တလီ က “မကြာမီကျင်းပမည့် ပင်လုံအစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်တို့နှင့် တောင်တန်းဒေသကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးကြပါ။ ယင်းကဲ့သို့ ဆွေနွေးညှိနှိုင်း၍ ရရှိလာသောသဘောတူညီချက်ကို ဗြိတိသျှအစိုးရက လက်ခံပါမည်” ဟုသဘောတူလိုက်သည်။
ဒုတိယပင်လုံအစည်းအဝေးတွင် ဗိုလ်ချုပ်ပါဝင်သောပြည်မမှအဖွဲ့နှင့် တောင်တန်းဒေသအသီးသီးမှ စော်ဘွားနှင့်ကိုယ်စားလှယ်တော်များ အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဆွေးနွေးကြသည်။ ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီး စပ်ရွှေသိုက်ကအချက်သုံးချက်က်ို ပြင်းပြင်းထန်ထန်တောင်းဆိုသည်။ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်၍မရ၊ ဆွေးနွေးပွဲကို ရပ်လိုက်ရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်သည် ရန်ကုန်ကိုပြန်ရန်အတွက် လေယာဉ်ကိုပင် စီစဉ်ခိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ပင်လုံရွာကလေးလည်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော်လည်း နောက်ဆုံးမှာတော့ အားလုံးညှိနှိုင်းလို့ရသွားပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ တစ်ပြည်ထောင်လုံးရှိ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၏ သွေးစည်းညီညွတ်မှုကို ပြသနိုင်ခဲ့သော ထိုနေ့ကို ‘‘ပြည်ထောင်စုနေ့’’ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့အထိ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သောနေ့ကို ပြည်ထောင်စုနေ့အဖြစ် နိုင်ငံတော်မှတရားဝင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၁၉၄၇၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပင်လုံသဘော တူစာချုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ၂၂ ဦး လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ပင်လုံစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော ခေါင်းဆောင် (၂၃)ဦးမှာ-
ခွန်ဖုန်း (မြောက်ပိုင်းသိန္နီ လူထုကိုယ်စားလှယ်)
ဆမားဒူဝါဆင်ဝါနောင် (မြစ်ကြီးနားကချင်ကိုယ်စား လှယ်)
ဦးကီယိုမာန် (ဟားခါးချင်းကိုယ်စားလှယ်) တို့ဖြစ်ကြသည်။
ကိုးကား။ ငါတို့ ဗိုလ်ချုပ်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ(ဦးပုလေး)၊ ပင်လုံစစ်တမ်း(ဦးအုန်းဖေ)၊ ကိုယ်တွေ့ပင်လုံ (ဦးဖေခင်)
ဓာတ်ပုံ။ Ministry of Information
by Ngul Ciin .7hours ago